ရင်နာစရာ ညီမလေး တစ်ယောက် ရဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် – Let Pan Daily
ရင်နာစရာ ညီမလေး တစ်ယောက် ရဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
ပရဟိတ မင်းသားတစ်လက် ဖြစ်တဲ့ ဝေဠုကျော် ကတော့ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကို ငွေအား၊ လူ အားနဲ့ မနှေးကူညီတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတ င်တော့လည်း တစ်တပ်တစ်အားအနေနဲ့ အိမ်တောင်မပြန်တော့ဘဲ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံနဲ့ Quarantine ဝင်မယ့် သူတွေ ကြိုပို့ရေးတို့ကို ကူညီနေသူတစ်ယောက်ပါ။
မနေ့ကတော့ ရင်နာစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှာထက်မှာ မျှဝေခဲ့ ပါတယ်။ “Covid က ဘဝတွေ၊ နှလုံးသားတွေကို တစစီ စုတ်ပြတ်သတ် သွားစေခဲ့ပြီ… ဒီနေ့ မိုးကသည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေတယ်….အမေဖြစ်သူကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကန်တော့ချိန်မှာ ခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ မြင်ရတော့ ဘေးကလူတွေပါ ငိုကြတယ်…..
Q ဝင်နေချိန် မိခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွား လို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေက ဝတ်ထားတဲ့ PPE ထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားရတယ်….မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ နိုင်ငံခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတ ယ်… . အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပေမယ့် Qတံတိုင်းကခြားလို့ နောက်ဆုံးအချိန် မိခင်နားမှာ မနေနိုင်ခဲ့ ဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အနေ နဲ့ ဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ့များ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာလဲ ညီမရယ်…
ကျွန်တော် ဘဝတစ်ကွေ့မှာ ကျင်လည် ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ တော်တော်များများ မှာတော့ အကျပ်အတည်းကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီးရင် Happy Ending နဲ့ဇာတ်သိမ်းလေ့ရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ Happy Ending က အဝေးတစ်နေရာမှာ မှုန်ဝါးဝါး ပဲရှိနေသေးတယ် ထင်ပါရဲ့” ဆိုပြီး ရင်နာစွာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့ လည်း “လူသားတိုင်း ရေဘေး မီးေ ဘး သဘာဝဘေး စစ်မက် ထူပြောခြင်းဘေး ဆင်းရဲခြင်းဘေးများမှ ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ရောဂါကပ်ဘေးများမှလည်း ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ” ဆိုပြီးတော့လည်း ဆုတောင်းခဲ့ပါသေး တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပိုက်ဆံသွားရှာပြီး ပြန်လာတော့လည်း မိခင်ရဲ့နောက် ဆုံးအချိန် ကို ဘေးမှာမရှိဘဲ Q Center ထဲမှာပဲ နေခဲ့ရ တဲ့ညီမလေးအတွက် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ…
ရငျနာစရာ ညီမလေး တဈယောကျ ရဲ့ အဖွဈကို စိတျမကောငျးစှာ မြှဝခေဲ့တဲ့ ဝဠေုကြျော
ပရဟိတ မငျးသားတဈလကျ ဖွဈတဲ့ ဝဠေုကြျော ကတော့ လိုအပျနတေဲ့နရောတိုငျးကို ငှအေား၊ လူ အားနဲ့ မနှေးကူညီတတျသူတဈယောကျပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကာကှယျရေးလုပျငနျးတှစေတ ငျတော့လညျး တဈတပျတဈအားအနနေဲ့ အိမျတောငျမပွနျတော့ဘဲ ဝဘောဂီအထူးကုဆေးရုံနဲ့ Quarantine ဝငျမယျ့ သူတှေ ကွိုပို့ရေးတို့ကို ကူညီနသေူတဈယောကျပါ။
မနကေ့တော့ ရငျနာစရာအဖွဈအပကျြတဈခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြမှာထကျမှာ မြှဝခေဲ့ ပါတယျ။ “Covid က ဘဝတှေ၊ နှလုံးသားတှကေို တစစီ စုတျပွတျသတျ သှားစခေဲ့ပွီ… ဒီနေ့ မိုးကသညျးသညျးမဲမဲ ရှာနတေယျ….အမဖွေဈသူကို နောကျဆုံးနှုတျဆကျကနျတော့ခြိနျမှာ ခုလို ပုံစံမြိုးနဲ့ မွငျရတော့ ဘေးကလူတှပေါ ငိုကွတယျ…..
Q ဝငျနခြေိနျ မိခငျဖွဈသူ ကှယျလှနျသှား လို့ ကတြဲ့ မကျြရညျတှကေ ဝတျထားတဲ့ PPE ထဲမှာ ပြောကျဆုံးသှားရတယျ….မိသားစုကို ထောကျပံ့ဖို့ နိုငျငံခွားမှာ ပငျပငျပနျးပနျးအလုပျလုပျခဲ့ရတ ယျ… . အခြိနျမီပွနျလာခဲ့ပမေယျ့ Qတံတိုငျးကခွားလို့ နောကျဆုံးအခြိနျ မိခငျနားမှာ မနနေိုငျခဲ့ ဘူး။ အမြိုးသမီးတဈယောကျ အနေ နဲ့ ဘယျလိုအငျအားတှနေဲ့မြား ရငျဆိုငျခဲ့တာလဲ ညီမရယျ…
ကြှနျတျော ဘဝတဈကှမှေ့ာ ကငျြလညျ ရိုကျကူးခဲ့ရတဲ့ ရုပျရှငျတှေ တျောတျောမြားမြား မှာတော့ အကပျြအတညျးကာလကို ဖွတျကြျောပွီးရငျ Happy Ending နဲ့ဇာတျသိမျးလရှေိ့ပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးရဲ့ Happy Ending က အဝေးတဈနရောမှာ မှုနျဝါးဝါး ပဲရှိနသေေးတယျ ထငျပါရဲ့” ဆိုပွီး ရငျနာစှာရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ထပျပွီးတော့ လညျး “လူသားတိုငျး ရဘေေး မီးေ ဘး သဘာဝဘေး စဈမကျ ထူပွောခွငျးဘေး ဆငျးရဲခွငျးဘေးမြားမှ ကြျောလှားနိုငျပွီး ရောဂါကပျဘေးမြားမှလညျး ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ” ဆိုပွီးတော့လညျး ဆုတောငျးခဲ့ပါသေး တယျ။ နိုငျငံခွားမှာ ပငျပငျပနျးပနျး ပိုကျဆံသှားရှာပွီး ပွနျလာတော့လညျး မိခငျရဲ့နောကျ ဆုံးအခြိနျ ကို ဘေးမှာမရှိဘဲ Q Center ထဲမှာပဲ နခေဲ့ရ တဲ့ညီမလေးအတှကျ စိတျမကောငျးစရာပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ…
ဘယျလိုတှတေောငျ မိမိုကျလှနျးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျနတောလညျး မတျမတျ သငျဇာ
ဖြူဖြူထွေး ကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့ မင်းခန့်ကျော် အ‌ကြောင်းကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ “ဟန်ငြိမ်းဦး”